I-Instagram Video Editor -Izicelo zokongeza iimpembelelo ezizodwa Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
I-Instagram video editor - Izicelo zokongeza iziphumo ezizodwa
Oktobha 15, 2018 0 IiCententarios 492
Ezi zicelo zihlala zibandakanya izixhobo ezinokuthi ziqwalaselwe ukuhlela, nangona kunjalo ndizibekeke kwicandelo elahlukileyo, kuba baya ngaphaya kwamandla esoftware yokuhlela ukusebenzisa izihluzi, isivuno, ukongeza isincamathelisi, isicatshulwa okanye umculo ...
Apha unokufumana ii -apps ukwenza iikholaji, unike imiboniso bhanyabhanya okanye ukubamba okudala, isitayile sekhamera yakudala kwiividiyo zakho, ezo shoti zikhethekileyo ukubalisa amabali kunye nexesha elifanelekileyo, ukulingisa ubuchule obuthile bokufota kunye nokuvuselela indlela eyahlukileyo yokubalisa ibali lakho ngomzuzu omnye . Unako ukuzidibanisa ezi nkqubo kunye Abahleli bevidiyo abalungileyo be-instagram kunye nokwenza iifayile zemultimedia ezimangalisayo.
Ndiyathemba ukuba uyonwabile kwaye ufumane eyona ilungele eyona nto uyifunayo ukuhambisa iprofayile yakho ye-Instagram.
Izicelo ze9 zokudala iziphumo kwiividiyo
1 Izicelo ze9 zokudala iziphumo kwiividiyo
1.2 Ukuhamba kwexesha Pro
1.3 Iziphumo ze-Instagram ngeProjekthi iTrodod
1.4 Ikhamera yeVintage 8mm yeVidiyo
1.7 I-1 yesibini yesibini mihla le
1.8 Uyenza njani imiphumela ekhethekileyo kwiividiyo nge Boomerang
1.9 Ikhamera yeGif Me, umhleli wevidiyo ye-instagram efanelekileyo
1.9.1 Umhleli wevidiyo ye-Instagram Yiphi oyithandayo?
Sisicelo esihle nje, esinokuthi senze iikholeji zevidiyo (Ezona zilungileyo kwihlabathi liphela)! Ukufikelela kwiividiyo ezine kwikholaji enye kwaye ayikhawulelwanga kwiividiyo, ungadibanisa neefoto ngokunjalo.
Inika imiboniso emithandathu eyahlukeneyo yesakhelo sokuhlela ikholaji yakho ngokweemfuno zakho.
NgePicPlayPost uya kuba ne-72 yeepateni zangasemva ukuze uzilungiselele ngokwesihlo okanye umxholo, kodwa ukudibanisa le app yinto yayo yokuyila kunye neyonwabisayo evumela ukujikeleza kweekona zeevidiyo zakho. Unokongeza umculo owugcinileyo kwiselula yakho.
Ngokomgaqo ibifumaneka kuphela kwi-iOS kodwa ingxelo ye-Android sele ikhutshiwe. Kunye nefowuni yeWindows? Siza kuqhubeka silinde uRudy Huin wehlabathi, ophetheyo ekuphuhliseni usetyenziso lwabasebenzisi bezixhobo eziphathwayo kunye nenkqubo yokusebenza yeMicrosoft.
Android - iOS - mfono Windows
Ukuhamba kwexesha Pro
Kukuzivelela kwenkqubo yokuqala ebizwa ngokuba yiLaps It kwaye yayifumaneka kuphela kwiifowuni ze-iOS kunye ne-Android, iThuba lokuPhulukana nexesha liphuculwe kwaye lifumaneka kuye wonke umntu. Ilungile kubasebenzisi beefowuni zeWindows!
Esi sicelo sikuvumela ukuba wabelane ngeevidiyo ezenziwe ngeXesha eliDlulayo okanye kwiXesha lokuFota kubuchwephesha kwi-Instagram, elinye igama elaziwa ngalo yi-Stop motion, apho iziganeko ezithi zenzeke ngokuthe chu ziboniswe ngendlela ekhawulezayo.
Ngaba uyakhumbula ukuba ukhe wabona ezo ziqhushumbisi zibonisa indlela isigqubuthelo esijika ngayo sibe yibhabhathane okanye indlela imbewu ekhula ngayo ibe sisityalo esincinci?
Ngokuhamba kwexesha Pro unokwenza olu hlobo lweevidiyo, ineefilitha zokwenza iziphumo kwiividiyo, ithuba lokongeza isandi kwividiyo yakho kunye nokulawula ixesha phakathi kwefoto nganye ngokumisela inani lemifanekiso ngomzuzwana, ukuqala kwenye ngomzuzwana .
Olunye ukhetho olunomdla kakhulu lolu hlelo lokusebenza kukuba unokukwazi ukufaka inkqubo ekubethelelwa kwimowudi ezenzekelayo, inolawulo lohlengahlengiso lwentsalela emhlophe, ixesha lokubonisa kunye nokugxila okuhlengahlengiso.
Amathuba okuyila anikezelwa sesi sicelo agubungela zonke iintlobo zeziganeko kunye nemisebenzi, efanelekileyo kuyo nayiphi na into ofuna ukuyibonisa ngokulandelelana, i-aurora, ukutshona kwelanga, iminyhadala, imiyalelo, ngaphambi nasemva kwayo nantoni na onokucinga ngayo.
Ayisosimahla, ixabisa i- € 2,99, nangona kwiifowuni ze-W. Ungabelana ngeevidiyo zakho kuthungelwano lwakho lwentlalo Facebook, Instagram, YouTube ...
Khuphela ixesha lokuPhulukana neXesha
Iziphumo ze-Instagram ngeProjekthi iTrodod
Efanayo kwiXesha lokuDuka kwexesha, esi sicelo senziwe ukuba senziwe imifanekiso ngobuchule bokumisa intshukumo. Ikhethekileyo kwizixhobo mfono Windows y Apple, Kodwa kungekudala iya kufumaneka kwi-Android.
Ukuveliswa kwetekhnoloji kunye nale app kunye nezinye ezinokubonelela zinokushwankathelwa kukuba ii-software ziyalela okanye zihambelane nemifanekiso yakho ukuze kubonakale ukuba zonke zithathwe kwikona enye. Ukongeza "ukuzilungiselela" ukuze ulungelelanise ukuthatha kwakho okulandelayo ngokusemandleni akho.
Ngokungathi uthathe umfanekiso wakho kunye ne-tripod ibekwe kwindawo efanayo neyenza iifoto zengcali.
IProodod Project yigama loluntu onokuthi wabelane ngalo ngevidiyo yakho kunye nabanye abasebenzisi abavela kulo naliphi na ilizwe, ukongeza kwiinethiwekhi zakho zentlalo. Kusimahla
Khuphela iprood ezintathu zeProjekhthi
iOS - Ifowuni yeWindows
Ikhamera yeVintage 8mm yeVidiyo
Esi sicelo siguqula ikhamera ye-iOS okanye ifowuni yakho ye-Android ibe yikhamera ye-8 mm yenye yezona ziphumeleleyo kwintengiso kwiminyaka elishumi ye-60, apho iividiyo zazenziwe ngaphandle komsindo. Oko kunokubonwa usebenzisa iprojektha. Itekhnoloji yezi khamera yaphuhliswa nguKakak kwiminyaka ye-30.
Ukuba uyayithanda imeko yomoya ukuvunwa kweediliya, kunye nale app kunye neefilitha ezinazo, ngamaxesha, iividiyo zakho zinokukugqiba.
Inguqulelo ye-iOS yahlukile kuhlobo lwe-Android
Inguqulelo ye-Android ineefilitha ezintlanu zesitayile sefilimu kunye nokukwazi ukulungelelanisa ngesandla Ubunzulu be-satellite, ukuqaqamba kunye nantlukwano.
Inguqulelo ye-iOS idibanisa amacebo esixhenxe ngokugqitywa kwe-10 eyahlukileyo, ehambelana nenani leentlobo zeelensi kwaye ivumela uhlengahlengiso ekuboniseni nasekugxileni.
Ukusuka kwi-Instagram, Hyperlapse, igama lakhe nje ngobukhulu obuhle. Iyafumaneka iOS y Android.
Ikhamera yeselfowuni isenokungabinaso isisombululo esifanelekileyo sokwenza iividiyo ngokucacileyo, iHyperlapse ibandakanya phakathi kweempawu zayo ezingenakubalwa umfanekiso wozinzo okuphucula kakhulu ukubonakala kwevidiyo yakho kuyinika ukugqiba kobungcali.
Oluzinzo olunciphisa ukungangqinelani phakathi komfanekiso omnye kunye nolunye, lubonelela ngamathuba okutshintsha isantya sokudlala sokulandelelana kwakho, onokuthi usebenzise bobabini ukwenza ulandelelwano (olukhawulezileyo) ulandelelwano, kunye nokunikezela ngeenkcukacha zalo naluphi na umsitho onqwenela ukunxibelelana nawo.
Nge-Hyperlapse iividiyo zakho zihlelwe aphile kunye neziphumo zinokwenziwa kwividiyo ngolawulo lwayo olulula kunokwenzeka ukuba uhlengahlengise ukubonakaliswa.
Ukuba ufuna ukubona iividiyo ezithile ezenziwe ngesi sicelo ungakhangela kwi-Instagram kwifowuni yakho ubeke kwindawo ephambili kwibhari yokukhangela, ungabona ukuba abanye abasebenzisi babelana ngantoni kwaye baphefumlelwe ukuba benze eyakho.
Ikhethekileyo ukwenza iikhola zeefoto zakho kunye nevidiyo, kunye nokusetyenziswa kwezixhobo Android Kuyenzeka ukuba uqokelele imifanekiso kunye neevidiyo kwitemplate efanayo, ungongeza imifanekiso ye-gif kwaye ubone kwimodi imbonakalo Ngaphambi kokuba uyithumele kwi-Instagram, kwi-Twitter okanye kwiprofayile yakho kaFacebook. Yenza Iziphumo ze-instagram kwimizuzu embalwa
Lungiselela ifomathi yemifanekiso yakho ngokuzenzekelayo, unokujikeleza ividiyo, usebenzise izakhelo ukwenza ngokwezifiso, ukongeza umculo owuthandayo. Yeyazimahla.
I-1 yesibini yesibini mihla le
Le sicelo indikhumbuza ubugcisa be ukuphelelwa lixesha okanye yeka intshukumo, isiqubulo sayo esithi "Ubomi benziwe ngemizuzwana", kuluncedo ukwenza iividiyo ngomzuzu omnye yonke imihla okanye ezininzi kangangoko ufuna kwaye ungabeka umboniso kunye nayo yonke le mifanekiso kwaye ubone utshintsho olwenzekileyo ekuhambeni kwexesha. .
Abanye oomama bayayisebenzisa ukubhala ukukhulelwa kwabo okanye ukukhula kosana lwabo, okanye ukuba utya ukutya ukuze ubone ukuba wehla njani emzimbeni kwaye ufumane ubunzima bemisipha, inokusetyenziselwa ukubhala uxwebhu lolwakhiwo, umsebenzi, iprojekthi, ulingelo okanye isabelo sesikolo ... izicelo ezisebenzayo kunye nokusebenza.
Nge-1 yesiBini semihla ngemihla unokuguqula ezo zihlandlo zikhethekileyo zibe ziimuvi kwaye wabelane ngazo kungekuphela nje kwiinethiwekhi zakho zentlalo njengoko Instagram, Umthunywa, Facebook; kodwa ekuhlaleni yenzelwe le nto.
Iyafumaneka kwi-iOS kunye ne-Android kwaye ihlawulwe.
Uyenza njani imiphumela ekhethekileyo kwiividiyo nge Boomerang
Iphuhliswe yi-Instagram, le app iyakuvumela ukuba uzenzele ezakho ii-gifs.
I-gif luhlobo lwefayile (iFomathi eFanayo eguqukayo) enesiphumo sopopayi esifezekiswa ngokuvelisa ngokukhawuleza imifanekiso eliqela elandelelanayo, ngaphandle kwesandi kwaye ikwimo yeluphu okanye yokujikeleza ukusukela kulandelelwano luphindaphindiweyo ngokungapheliyo. Iyahambelana nefomathi yohlobo lwenkcazo yePowerPoint, kodwa apho ifumene khona ukuthandwa ngakumbi kuFacebook.
Nge boomerang iselfowuni yakho inokudubula kwimodi yokuqhekeza kwaye ujike iifoto zakho zibe yinto emnandi ye-gif. Ingasetyenziselwa ngasemva okanye ikhamera yangaphambili yesixhobo sakho esiphathwayo, ukuze wenze ezakho i-animies.
Ikhamera yeGif Me, umhleli wevidiyo ye-instagram efanelekileyo
Ifana nale yangaphambili, le sicelo simahla se I-iOS kunye ne-Android, yaphuhliswa ngokukodwa ukwenza kunye nokwabelana ngeevidiyo ze-GIF.
Kulula ukufakela kunye nokusebenzisa, ikuvumela ukuba uthathe i-shots kwimodi yokuqhekeza ukudala ukulandelelana kweefoto zoopopayi, ngaphandle kwesandi, kodwa kumnandi kakhulu.
Ungathatha ukuthathwa ngekhamera yakho, kodwa ungasebenzisa iifoto ezivela kwigalari yakho, inezihluzi ezifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo, ungongeza isicatshulwa kunye nesakhelo sopopayi wakho, inguqulelo ye-Pro isusa i-watermark, kodwa ihlawulwe.
Ikuvumela ukuba wabelane ngendalo yakho ophathwayo ngokusebenzisa iinethiwekhi zentlalo. Eyona nto intle kukuba kukho uguqulelo lwabasebenzisi bezixhobo ezinenkqubo mfono Windows.
Khuphela ikhamera yeGif Me
Umhleli wevidiyo ye-Instagram Yiphi oyithandayo?
Ukuba sele ungumsebenzisi we-Instagram usenokuba uqhelene nazo naziphi na izicelo endizibandakanyileyo kolu luhlu, zininzi ezinye, akunakwenzeka ukuba uzikhankanye zonke kuba ngelixa ufunda eli nqaku kufuneka kubekho umphuhlisi ongazinzisiyo osebenza kwinto enkulu ukusothusa. Yonke imihla kwenzeka into entsha kwintengiso ye-app, ngakumbi imifanekiso okanye indlela yokwenza iziphumo ezikhethekileyo kwiividiyo.
Izinketho zokuhlela iifoto zininzi kwaye kusengqiqweni kuba ukhetho lokwenza iividiyo kamva lwongezwa kwi-Instagram kwaye, ngokomgaqo, lwalunqunyelwe kwimizuzwana elishumi elinesihlanu mhlawumbi ababengabasebenzisi abaninzi ababenomdla ngale fomathi.
Inyani yokuba ngoku sinokuba neevidiyo ezingamashumi amathandathu anesibini iividiyo ezikhuthaze abasebenzisi bale iqonga lonxibelelwano elinomdla ukuba bafikelele kule ntetho babelane ngezimvo kunye neemvakalelo zabo, kwaye kwangaxeshanye bakhuthaze uphuhliso lwezicelo zokwandisa ezi vidiyo, zizenzele , ubenza basebenze ngakumbi ngenjongo yokunxibelelana iimfuno zakho ngomzuzu.
I-Instagram yeqonga elifanelekileyo kwabo baqala kwifomathi yevidiyo, umda wexesha ekufuneka ucwangcise into oza kuyiveza, ucwangcise umxholo wakho kwaye unikezele ngento enomdla, eyintsusa kunye nenqanaba eliphezulu; ekwenza ufumane ukuthandwa, abalandeli kwaye ukuvumela ukuba ukhule iprofayili yakho kule nethiwekhi yoluntu.
Kuhleli kuwe kuphela ukuba ukhethe into oyifunayo, zama usetyenziso oluye lwatsala umdla wakho ukubona ukuba ziyakusebenzela na, ii -apps ezininzi zisimahla kwaye ke unokuvavanya ngcono ukuba luncedo kweenjongo zakho kwaye ukuba kufanelekile ukuthenga uhlobo lwePro, ihlawulwe.
Ukukhetha okuhle usetyenziso lwe-Instagram eziziqhelo kwi-2018
Ukuba unomdla wokubuyela kwimeko engalibalekiyo okanye ungene ngendlela ehlekisayo, unokukhetha usetyenziso Ikhamera yeVintage 8 mm yeVidiyo kwaye unike ukubamba okudala kwividiyo yakho. Ukuba uthanda ukugqibelela kwaye unakekele zonke iinkcukacha oza kuzifuna kumhleli olungileyo. Ngoku ungayenza iividiyo ezineziphumo ezizodwa!!
Kwimeko yam ndingu fan i collage kwaye ndicinga ukuba kuyinto entle ukukwazi ukudibanisa ividiyo kunye neefoto zihambelana ngexesha elinye.
Ngazo zonke izixhobo zokusebenza esinazo ngokwenene ingcinga yethu ingumda.
Ucinga ntoni ngeli nqaku? Ukuba unqwenela, ungashiya amagqabantshintshi akho, ubuze imibuzo okanye wabelane ngayo nabahlobo kwiinethiwekhi zakho zentlalo.
Ungaba nesibindi sokwenza ividiyo uze uxelele ibali lakho?
Zona zokusebenza ezilungileyo kakhulu zokuyila iifoto kwi-Instagram